Real Madrid oo Guul Dirqi ah ka gaartay Dhigeeda Espanyol+SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo Guul Dirqi ah ka gaartay Dhigeeda Espanyol+SAWIRRO
CR Shariif September 23, 2018
( La Liga ) 23 Sab 2018. Real Madrid ayaa noqotay hogaanka horyaalka La Liga kaddib gool uu hdlaiyay Marco Asensio oo lagu xaqiijiyay aalada VAR kasoo ay kaga filnaatay inay 1-0 ku garaacaan kooxda Espanyol.
Asensio ayaa shuud hoose ku dhameystiray goolka kaddib darbad ka timid laacibka Luka Modric oo ku dhacday mid kamida cayaariyahanada kooxda martida balse goolkaa waxaa meesha ka saaray inuusan Offside aheyn aalada caawisa garsoorka.
Borja Iglesias ayaa shuug xoogan birta ku garaacay waxayna aheyd fursad ay goolka barbaraha ku heli kareen kooxda Martida.
Goolhayahii hore ee Real Diego Lopez ayaa kubbad halis aheyd si fiican kaga badbaadiyay daafaca Sergio Ramos iyadoo dhinaca kale uu sameeyay badbaadin dhawra kulankii ka dhacay Bernabeu.
Guushan ayay ka dhigan tahay in kooxda Julen Lopetegui ay ka sare maeto dhigooda Barcelona, waxyan si ku meel gaara ku ahaan doonaan hogaanka horyaal ilaa laga ogaado natiijada dheesha Barca ay maanta la qaadan doonto Girona.
Espanyol ayaa u dhacday booska lixaad kaddib markii Atletico Madrid ay 2-0 uga adkaatay Getafe horaantii kulamada sabtida.
Valverde oo ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda kaga qeyb galaya kulanka Girona iyo ciyaartooy ee ka maqaan
Inter Milan oo Waqti Dambe Guul ka Gaartay Sampdoria inkastoo la Diiday Seddax Gool Kulankan